အဲတာကြောင့် အဖွဲ့ လေးတစ်ခုဖွဲ့ ပြီတော့လုပ်လိုက်တယ်။ကျွန်တေ်ာစာဖတ်သူတွေလဲမဖတ်ဘဲမနေရအောင်ပေါ့
changeing your voice
ကိုယ် ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ပြောင်းပေးဖို့လေဗျာ။ မိန်းကလေးအသံ၊ ကလေးအသံ၊ ယောကျာင်္းလေးအသံ၊ သရဲအသံ၊ ခွေးအသံ၊ (သို့မဟုတ်) မိမိလိုချင်တဲ့အသံတွေကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်။ နောက်ခံအသံတွေ အနေနဲ့လည်း မြို့ထဲက ကားဟွန်းသံတွေလိုမျိုး ကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်။ ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတော့ … ကွန်ပျူမှာသုံးရင်တော့ chatting တွေ နဲ့ ဖုန်းဆက်ဖို့အတွက် သုံးလို့ရသလို၊ သီချင်းသမားတွေအတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ နောက်ခံကားသံတွေထည့်ပြီး ‘ချစ်ရေ .. ကိုယ် မြို့ထဲရောက်နေလို့ကွာ’ ပေါ့ ။း)
ဖုန်းထဲမှာသုံးတဲ့ program လည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ယောက္ခမ က ယောကျာင်္းလေးသံနဲ့ဆို မခေါ်ပေးတာမျိုး ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေ။ အနည်းဆုံးတော့ အပျော်သဘောအနေနဲ့ သုံးလို့ရတယ်လေ။ အပျော်ပေါ့ဗျာ … စမ်းကြည့်ပါဦး။
ကျနော် software ရှယ်တဲ့အလုပ် သိပ်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုကောင်လေးက အပျော်သုံးလေး ဆိုတော့ ကြည်နူးမှုလေး ရှယ်ယာတဲ့ သဘောပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေ …ကျော်ကိုကို
ဟိုနေ့က ak က ဖုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေး ရှိရင်ပြောပါဦးဆိုလို့ သတိရသွားတယ်။ ကျနော်တော်တော်လန်းတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုတွေ့ထားတယ်ဗျ။ Mobile အတွက် java application တွေကို free ပေးတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပေါ့။ အဲလိုမျိုးပေးတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်။ (သိတယ်ဟုတ် သံလုံငယ် က ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် ပြောတာ)။ သူ့ဆီ စစရောက်တာနဲ့ မိမိဘာဖုန်းအတွက် ရှာတာလဲဆိုတာကို အရင်ရွေးခိုင်းတယ်ဗျ။ အဲဒါရွေးပေးပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပေးတဲ့ application အားလုံးက ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာတွေချည်းပဲ ဖြစ်သွားပြီလေ။ အဆင်မပြေမှာလည်း မပူရတော့ဘူး။ free ကလည်းရ၊ download ပေးထားတာကလည်း direct link နဲ့။ အဲဒါအပြင်ကို Additional Categories အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပေးထားတော့ သုံးချင်တဲ့ application ကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်တယ်။ ကဲ … ဘယ့်နှယ့်ရှိစ
ကွန်ပျူတာကနေ ဒေါင်းဖို့အတွက် အပေါ်ပုံမှာ ကျနော် point လုပ်ပြထားတဲ့အတိုင်း download this application to your computer ဆိုတဲ့ စာသားကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒေါင်းလုပ်ကျလာပါပြီ။ အဲဒီရလာတဲ့ ဖိုင်ကို မိမိဖုန်းထဲထည့်ပြီး install လုပ်ပေးယုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းထဲ ဘယ်လိုထည့်လဲတော့ ပြောစရာမလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ …
နက်ဖြန်ကျရင်တော့ ပို့စ်ကောင်းကောင်းလေး ရေးမယ်ဗျာ …. (အခုက မရေးတာထက်စာရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တာလေးတွေ အချိန်ပေးနိုင်သလောက်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ နားလည် အားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်)ဒီတာလေးကကိုသံလုံးငယ်ဆိုက်မှာကောက်နုတ်ထာတာလေးပါအားပေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
အဲ တော်တော်တင်းဖို့ ကောင်းလာတယ်ဗျ... မီတာ ဗုံးအသစ်တွေပာာ အပောာင်းတွေထက် ပိုပြီးတော့လည်တယ်ဗျ...
ဒီတော့ တစ်ချို့ အတွက်တော်တော် ဆိုးဆိုးဘဲဖြစ်နေတာပေ့ါ...
ဒါကြောင့်ဒီနည်းတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်သိတာတော့ (3)နည်းရှိပါတယ်...
1 - မီတာ လည်စက်ကို ပြောင်းပြန်တပ်ထားခြင်း..
ဒါကမိရင်အန္တာရာယ်တော်တော်များကို မပြောတာပြကို ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်ဗျ..
2 - သံလိုက်တုံးတင်ခြင်း
အင်းဒီလိုပါ မီတာ လည်တဲ့စက်ပေါ်မှာ သံလိုက်တုံးကြီးကြီးလေး တင်ထားရင်ပိုကောင်းတာပေ့ါ.. သံလိုကဆွဲ အားကြောင့် မီတာ လည်တာကို နှေးသွားပါလိမ့်မယ်...
3 - သဘာဝကို အားကိုးနည်း..
ဒါကတော့ အကောင်းဆုံးပေ့ါ သူ့ ဘာသာလာစစ်စစ် မစစ်စစ် အေးဆေးဘဲနေလို့ ရပါတယ်။။။
အရင်ဆုံး အကော်ချောင်းလေးတစ်ခုယူပါ .. မာတာလေးပေ့ါ.. ဘောပင်တည်းကမှင် ချောင်း လေးဆိုလည်းရပါတယ်....
မှတာ ဗုံးအပေါက်လေးမှာ လမ်းကြောင်းလေး ဆွဲပေးလိုက်ပါ... ပြီးရင် မီတာ အုံပေါ်ကို အချိုဓာတ်ပါတဲ့အရည် ကို နည်းနည်းလေးလောင်းပေးရပါမယ်.. (3)ရက်လောက်ပေ့ါ.. (ဥပမာ - ထန်းလျှက် ရည်.)
အဲမှစတာဘဲ ပုရွတ်ဆိတ်က အုံဖွဲ့ သွားပါလ်ိမ့်မယ်။... ဒါဆိုသူတို့ အုံဖွဲ့ သွားမူကြောင့်မီတာ လည်တဲ့ ပလိပ်ပြား လေးကို သွားပြီ ထိနေပါလ်ိမ့်မယ် . ဒါဆို မီတာလည်မှူနန်းနည်းသွားပြီး မီတာခသက်သာပါလ်ိမ့်မယ်.။။...
လာမေးတော့လည်း "ကျွန်ပ်လည်းမသိဘူးဗျ.... သူ့ ဘာသာသူဖြစ်နေတာ ဓာတ်လိုက်မှာကြောက်လို့ မလုပ်ဘဲထားထား တာလို့ ပြောလိုက် " အဲမပိုင်ဘူးလား။။။။။။။။။။
ကျွန်တော် facebook hacking လေးေ၇းပြီးဒါလေး ပါထပ်ရေးပေးမယ်လို့ . .ပြောလိုက်တာ အခုရေးပေးပါတယ်နော်.. ကျွန်တော်နောက် ရေးမည့် bat program ရေးနည်းကိုတော့နည်းနည်းကြာမယ်ဗျာ.
ကိစ္စအကြီးကြီးတစ်ခုအတွက် တစ်လလောက် အချိန်ပေးပြီးလုပ်ရမှာမို့ ပါ...
download book download here
(1) အရင်ဆုံး C:\_windows\_system32 ထဲက client.pra နဲ့ client2.pra ဆိုတဲ့ file နှစ် file ကို copy
(2) ပြီးရင်အဲဒီ File နှစ် file ကို msaccess (Microsoft Access) နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ....တစ်ဖိုင်ချင်းကိုဖွင့်ပါ...
(3) Password လာတောင်းလိမ့်မယ်... vanarp117 လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..
(4) ပွင့်သွားရင်...control ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ Admin Password ကို ဖျက်လိုက်ပါ...သူက encrypt
(5) ပြီးရင် taskmgr (Windows Task Manager) ကိုဖွင့်ပြီး Explorer .exe ကို End Process လုပ်ပေးပါ...
(6) ပြီးရင် အဒဲီပြင်ထားတဲ့ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို copy ကူးပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်း folder ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးပါ...
overwriteလုပ်မလား"လို့မေးလိမ့်မယ်...ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် yes to allလုပ်ပေးလိုက်ပါ...ပြီးရင် Café
zee ကိုပြန် run ပေးပါ...
(7) သူ့ရဲ့ Admin Option ထကဲိုဝင်လိုက်ရင် passwordလာတောင်းလိမ့်မယ်..ကျွန်တော်တို့ password
ကိုဖျက်ထားခ့တဲ့ အဲ တက်ွဘာမှမရိုက်ပဲ OK လုပ်ပေးလိုက်ပါ...သူ့ရဲ့ Admin ထဲဝင်သွားပါပြီ...
Admin Option ထမှဲာ ခင်ဗျားရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ Adjustment ဆိုတာကိုclick
လုပ်ပေးလိုက်ပါ...အဲဒီထမှဲာ (သူ့ရဲ့ Label တော့မေ့သွားပြီ) Text Box2 ခုရှိတယ်...အောက်က Text Box က
comment ..အပေါ်က Text Box မှာခင်ဗျားလျှော့ချင်တာကိုလျှော့ပါ..
(ပိုက်ဆံန့သဲုံးတာဆိုရင် ပိုက်ဆံကိုလျှော့ပါ...1000 ရှိပြီဆိုရင် 1000 ထိပဲရမယ်နော်..Negative
(Member ဆိုရင်တော့ သုံးထားတဲ့ နာရီထက်ပိုပြီးလျှော့လို့မရပါဘူး..13း0 သုံးထားတယ်ဆိုရင်
ကိုယ်လျှော့ချင်တာလျှော့ပြီးရင်တော့ ညာဘက်ထောင့်ဆုံးမှာ close session ကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ...
(လျှော့ပြီးတော့ continue ကို click လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှမထူးဘူးနော်)
အမြန်နှန်းမြင့်အင်တာနက်ဆိုင် internet speedအမြန်ဆုံးပာာAKပါ
metatrader, EUCasino, counters, Poker stars, Clubworld Casino
CASINO Casinoclub CASINO GAMES VISITOR COUNTER SpinPalace